Server natokana: ny tombony ho an'ny orinasanao | Avy amin'ny Linux
Mpizara voatokana: ny tombony ho an'ny orinasanao
Isaac | | Tambajotra / seriver
Azo antoka fa nahita vaovao marobe momba ny tranga izay nivarotan'ireo orinasa ny antontan-taratasin'ireo mpampiasa azy ireo tamin'ny antoko fahatelo izy ireo, na ny lalàna momba ny fiarovana ny angon-drakitra Eoropeana satria mpamatsy vola vahiny. Noho io antony io dia nipoitra ny tetikasa toy ny GAIA-X, ary koa serivisy rahona mangatsiatsiaka miaraka amina serivera manokana sy fiarovana hiarovana ny mpanjifanao.
Ireo orinasa ireo dia hanao manolotra izay ilainao rehetra, raha mila serivisy fampiantranoana tranonkala tsotra ianao a Server natokana Linux toy ny hoe mitaky fitakiana bebe kokoa ianao ary mila manana fahaiza-manao computing avo lenta ho an'ny Big Data, Deep Learning, sns., saingy tsy mila manana ny vidin'ny foibe angon-drakitra amin'ny fananana ianao.
1 Inona no atao hoe mpizara natokana?
1.1 Maninona no mifidy mpizara voatokana?
1.2 Inona no azoko atao aminy?
2 Ahoana ny fomba hisafidianana mpizara voatokana?
Inona no atao hoe mpizara natokana?
Un mpizara voatokana, Izy io dia karazana mpizara ara-batana azonao ampiasaina amin'ny fomba feno sy manokana. Izany hoe, tsy vahaolana iraisana na fizarazarana mampiasa VPS (Virtual Private Server) hizarana loharanom-pitaovana ara-batana amin'ireo mpanjifa marobe.
Maninona no mifidy mpizara voatokana?
Misy ity karazana fanoloran-tena ity tombony mazava tsara momba ny VPS:
Raha mila capacities avo lenta ianao dia mora kokoa ity karazana haitao ity raha oharina amin'ny VPS.
Ny tsy fisian'ny sosona virtoaly dia azonao atao ny manararaotra ireo loharano azo ampiasaina amin'ny fitaovana mivantana sy manokana, izay manatsara ny fampisehoana.
Fantsom-pifandraisana avo kokoa ho an'ireo izay mila fifamoivoizana angona avo kokoa, ary miaraka amin'ny TTFB haingana.
Fahamafisana sy fitoniana amin'ny fanoloran-tena.
Fifanarahana sy fahaizana mandanjalanja loharanon-karena.
I mean, Ahoana no hanananao foibe angon-drakitrao, fa tsy misy ny sarany amin'ny fahazoana an'ity karazana fotodrafitrasa ity na ny olana amin'ny fitantanana sy ny fikojakojana. Amin'ny alàlan'ny fanakaramana serivisy sy fanombohana avy hatrany ny fitrandrahana azy.
Inona no azoko atao aminy?
Betsaka ny serivisy sy mpamatsy serivisy natokana ho azy, toa ny orinasa frantsay OVHcloud. Ireo mpamatsy serivisy rahona rehetra ireo dia manana tolotra maro ho an'ny mpanjifany, ary manana tanjona tena samihafa, ka manome fahafaham-po ny filàna rehetra. Ohatra:
Hasting: io no serivisy tsotra indrindra, ho an'ny mpiasa tsy miankina na orinasa kely mitady fampiantranoana Internet, na ho an'ny tranonkala iray ho an'ny asany, bilaogy, mpizara rakitra, webapp (toy ny fampiharana orinasa ERP, CRM, sns.), ho an'ny fivarotana e-varotra, Sns
Storage: ireo dia serivisy fitehirizana rahona manokana miaraka amina toerana avo be amin'ny tranga sasany, ary azo atao ny misafidy kapila mafy NVMe SSD. Azonao atao ny mampiasa ireo mpizara fitehirizana natokana hitehirizana ny tahiry, backup, fizarana fizarana sns.
lalao: Raha te-hamorona mpizara anao manokana ianao amin'ny horonan-tsary na streaming, azonao atao ny miantehitra amin'ity karazana mpizara voatokana ity, miaraka amin'ny zavatra rehetra ilainao amin'ireto karazan-java-manerantany ireto izay fahita ankehitriny. Ohatra, hahafahana mampihatra mpizara Minecraft.
foto-drafitr'asa: mpizara voatokana mahery vaika ho an'ny orinasa lehibe, oniversite ary orinasa hafa mila fahaiza-manao computing avo, bandwidth, fanohanan'ny fitaovana ho an'ny virtualization, ary capacities fitadidy avo.
KajyNy lozisialy natokana sasany dia mandeha amin'ny herinaratra manokana hanolorana fahaiza-manao computing ambony. Zava-dehibe izany rehefa manandrana mihazakazaka rindrambaiko manana enta-mavesatra matematika avo lenta, toy ny simulation sy kajikajiana siantifika, Big Data, Learning Machine, sns.
Ahoana ny fomba hisafidianana mpizara voatokana?
Misafidy mpizara voatokana voatokana Tsy dia sarotra loatra izany asa izany, indrindra amin'ireo vahaolana tena manokana sy tsotra atolotry ny mpamatsy. Na izany aza, raha mila antsipiriany bebe kokoa ianao dia tokony hitandrina ireto teboka manaraka ireto:
Unité centrale- Tokony hoeritreretinao foana ny herin'ny computing ilainao amin'ny tanjonao. Ohatra, amin'ny fampiantranoana tranonkala dia tsy ilaina ny manana fahaiza-manao tafahoatra, fa ilaina amin'ny fampiharana siantifika sasany izany.
ram: toy ny CPU, ny hafainganam-pandehany, ny faharetany ary ny fahaizany, hiankina ny fahombiazan'ny rafitra mpizara natokana ho anao.
fitehirizana- Hahita vahaolana isan-karazany ianao, toy ny HDD na SSD ho an'ny mpizara natokana ho anao. Zava-dehibe ny fisafidianana ny haitao mety indrindra mifanaraka amin'ny filanao, ny maha NMVe SSD haingana indrindra. Ary tsy tokony hanadino ny fahaiza-manao ka ampy ho an'ny zavatra tadiavinao.
Rafitra fandidianaNy rafitra GNU / Linux dia matetika ampiasaina amin'ny fahamendrehany, fiarovana, ary fitoniana, ankoatry ny fahazoan-dàlana malalaka. Na izany aza, maro ny VPS na serivisy serivisy natokana no manolotra ny fahafaha-manana Windows Server raha mila mampiasa fampiharana manokana ianao.
Ancho de banda: Tokony hiahiahy momba ny fetran'ny famindrana angona napetrak'ity karazana serivisy ity ianao, satria raha manana fifamoivoizana be ianao dia mety mila manangona vahaolana amin'ny sakany tsy voafetra na avo kokoa.
GDPR: Zava-dehibe ny manamarika fa ny mpamatsy vola eropeana, toa ny OVHcloud, dia mety ho safidy tsara raha te hampihatra ny lalàna fiarovana ny angon-drakitra Eoropeana ianao, izay antoky ny serivisy rahona hafa tsy eropeana.
Ho fanampin'ireto teboka ireto, serivisy sasany manolotra teknolojia fiarovana sasany, backup automatique, sns. Ireo karazana rehetra ireo Extras tongasoa foana izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tambajotra / seriver » Mpizara voatokana: ny tombony ho an'ny orinasanao
Dogecoin Wallets: Ahoana ny fametrahana ireo Wallet ofisialy amin'ny GNU / Linux?
GOS-P3: Mikaroka ny loharano malalaka misokatra sy mitombo an'ny Google - Fizarana 3